Turkiga oo maanta gaadiid iyo qalab dhisme ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Turkiga oo maanta gaadiid iyo qalab dhisme ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir (SAWIRO)
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Mehmet Simsek oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa 52 gaari oo waaweyn iyo qalab dhismaha loogu talagalay ku wareejiyay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale).
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mehmet Simsek oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladiisa ay xilli kasta garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed, isagoona sidoo kale sheegay inay haatan wadaan mucaawino loogu talogalay dadka ay abaartu halakeysay Soomaaliya.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) oo isna warbaahinta la hadlay ayaa marka hore kaga mahad-celiyay dowladda Turkiga deeqda gaadiidka iyo qalabka dhismaha ah ay ugu deeqday maamulkiisa.
Wuxuu guddoomiye Yuusuf Jimcaale sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu shacabka Soomaaliyeed ugu faa’ideyn doonno deeqdaan ka timid Turkiga ee maamulkiisa la guddoonsiiyay.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay ay dowladda Turkiga qalab iyo gaadiid ay ugu deeqdo dalka Soomaaliya, waxaana la xasuustaa in Turkiga ay qeyb weyn ka qaadatay dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo weliba bad-baadinta shacabka Soomaaliyeed ee xilliyadii ay dalka abaaruhu ku dhufteen.